शेरबहादुर देउवा चढ्ने गाडी सचिवालयबाटै ‘गायब’ — Imandarmedia.com
शेरबहादुर देउवा चढ्ने गाडी सचिवालयबाटै ‘गायब’
काठमाडौ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले लिएको गाडीले दुई थरी बेथिति देखाएको छ। संसद् सचिवालयबाट सन् २०१३ मोडलको टोयोटा प्राडो गाडी लगेका देउवाले फिर्ता गर्दा भने २००७ मोडलको गाडी बुझाएका छन्। एक महिनाअघि फिर्ता भएको भनिएको पुरानो गाडी पनि संसद् सचिवालयबाटै ‘गायब’ भएको छ।
२०७४ मंसिरको चुनावबाट कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेपछि देउवाले संसद्बाट बा २ झ ४४८ नम्बरको गाडी लिएका थिए। २ हजार ५ सय सीसीको यो गाडी खासमा निर्वाचन आयोगको नाममा दर्ता छ। २०७० माघ ९ मा यातायात कार्यालयमा दर्ता गाडी आयोगसँग मागेर संसद् सचिवालयले देउवालाई दिएको थियो।
तर, देउवाले सेतो नम्बर प्लेटको सरकारी गाडीलाई २०७४ फागुन ३ मा निजी नम्बर प्लेटमा बदलेर बा १९ च ५५५ को रूपमा चढ्दै आएका थिए। मर्मत खर्च संसद्ले व्यहोर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले प्रतिपक्ष नेताको हैसियतमा प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, दुई महिनापछि भदौ २५ मा गाडी फिर्ता पनि गरे।
तर, आश्चर्य संसद्बाट लगेको गाडीको सट्टा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको १४ वर्ष पुरानो गाडी पठाए। देउवालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले टोयोटाको नयाँ गाडी दिएको छ। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न नयाँ गाडी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विभिन्न गाडी देउवाका लागि तैनाथ छन्।
तर उनले संसद् सचिवालयबाट लिएको नयाँ गाडी राखेर पुरानो गाडी किन पठाए रु ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्ले उपलब्ध गराएको गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, तर संसद्बाट लिएको गाडी सहज लागेकाले प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको हो। त्यसको सट्टामा अर्को गाडी संसद् पठाएका हौं,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको र पहिला प्रतिपक्षी नेताका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको गाडी देउवाका लागि राखिएको र अहिले मर्मत भइरहेको बताए। फिर्ता गरेको १४ वर्ष पुरानो बा २ झ ४२३६ नम्बरको टोयोटा प्राडो जिप संसद् सचिवालयमा पनि छैन, कहिले र कसले लग्यो भन्ने अधिकारीहरूलाई थाहा छैन, कतै अभिलेख पनि छैन।
खासमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएर फिर्ता गरेको भने पनि अभिलेखमा त्यस्तो देखिँदैन। हामीले उहाँलाई गाडी उपलब्ध गराएको रेकर्डमा देखिन्छ। संसद्बाट लगेको गाडीको सट्टामा अर्को गाडी फिर्ता गरेको भनिएको छ।तर, सवारी शाखाको रेकर्डमा देखिँदैन। फिर्ता भएको हो भने त्यो गाडी कहाँ कसले लग्यो भन्ने खुल्न सकेन,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने सचिवालयमा गाडी बुझाएको भर्पाइसमेत राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सादा कागजमा भनिएको छ, ‘बा २ झ ४२३६ नम्बरको प्राडो जिप थान एक बुझिलियौं। भदौ २५ गते २ बजेर ४५ मिनेटमा गाडी बुझिलिएको भनेर कागजमा संघीय संसद्को छाप लगाइएको छ। प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘तर, त्यसको विवरण संसद्को सवारी शाखामा छैन। गाडी आएको र गएको कुनै विवरण छैन, यो छानबिनको विषय हो।
यसैगरि, पाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्री मागेका छन्। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पौडेल खेमाले बुधबार तीन जना मन्त्री माग गरेको हो। मन्त्रीको टुंगो लाग्न नसकेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंह बैठकबाट हिँडेका छन्।
पौडेलको सचिवालयका अनुसार छलफलका क्रममा रौतहट र सर्लाहीको क्रियाशील विवादलाई लिएर पौडेल र सिंहको देउवासँग चर्काचर्की भएको थियो। यी दुवै जिल्लाका कार्यकर्ता क्रियाशील सदस्यता विवादलाई दिएर अनशनमा छन् । विवाद समाधान गरेर अनशनरत कार्यकर्तालाई दशैँ मान्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पौडेल र सिंहको माग थियो।
नेपाली कांग्रेस मुगु सभापतिमा ऐनबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति पक्षका उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका उम्मेदवार निवर्तमान सभापति खड्गबहादुर शाहीलाई ५६ मतले हराए। विजयी ऐनले ४ सय ६ मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी खड्गले ३ सय ५० मतमा चित्त बुझाए।
कूल ७ सय ५६ मत खसेकामा १६ मत बदर भएको छ। अन्य पदाधिकारीमा पनि देउवा पक्षकै वर्चश्व छ। उपसभापतिमा कर्ण रावल र हरिजंग शाही विजयी भएका छन्। सचिवमा जन्मजया भण्डारी र लोकेन्द्रबहादुर मल्ल विजयी भएका छन्। मुगुका निर्वान क्षेत्रमा पनि देउवा पक्षले जितेको छ।
प्रदेश ‘क’मा कार्मा फुल्जोक लामा र ‘ख’ मा लोकराज दाहाल सभपाति बनेका छन्।मुगुमा देउवा पक्षले सभापति, उपभापति, दई सचिव, एक सहसचिव, १३ सदस्य र १७ महाधिवेशन प्रतिनिधि हात पारेको छ। नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले चितवनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई लखेट्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार चितवनमा आयोजित बधाई शुभकामना तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। हामीले चितवनबाट रेणु र प्रचण्डहरुलाई लखेट्ने संकल्प गर्नुपर्छ’, चितवन कांग्रेसका सभापति श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो बीचमा एकता छ। हाम्रो बीचमा मनमुटाव छैन। हामी बीचको एकताले चितवनबाट आगामी चुनावमा कम्युनिस्टहरुलाई धुलो चटाएर खेद्नुपर्छ।
मेयर रेणु दाहालले कांग्रेसलाई वडावडामा पैसा बाढेर कम्युनिस्ट बनाउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले यो ज्यादती भएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्रीसमेत रहेकी रेणुलाई चितवनबाट लखेट्नुपर्ने बताएका हुन् । रेणु दाहालले गरेको ज्यादती । आज हामीले जितेका वडामा गएर पैसा लगेर कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट बनाउने रे १’, उनले मेयर दाहालतर्फ प्रश्नगर्दै भने, ‘यसको भण्डाफोर हामीले गर्नुपर्छ ।’
श्रेष्ठले कांग्रेसको महाधिवेशनमा सक्षम उम्मेदवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफू पुनः कांग्रेस चितवन सभापतिका लागि नलड्ने भन्दै एउटा पद दुई पटक नखाने उद्घोष गरे ।उनले पार्टीलाई गुटबिहीन बनाउनुपर्नेमासमेत जोड दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह यसपालि सभापति पदमा उठ्ने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्दैछ। सिंहले यसपालि आफू सभापति पदमा लड्ने बताइरहेका छन्। २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा आफू नउठेर रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइरालालाई सघाएको पनि उनले बताए।
‘अहिलेसम्म काठमाडौंबाट को पार्टी सभापति भएको छ ?,’ आज काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा सिंहले भने, ‘के हामी सधैं झोला मात्रै बोकेर हिँड्नुपर्ने ? उनले नेताहरूमा पदमा पुग्न होडबाजी गर्ने तर पद पाइसकेपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको पनि बताए। पदमा पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले काम गर्न नसकेको उनले बताए।
अहिलेको सभापतिलाई हेर्नुस् न, चार वर्षसम्म पनि विभाग गठन गर्न सक्नु भएन,’ उनले भने। उनले पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेसमा गुट नै गुट रहेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले ए कांग्रेस, बी कांग्रेस र सी कांग्रेसभन्दा पनि नेपाली कांग्रेस जनताले खोजेको बताए।
जनताले खोजेजस्तो नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनपछि आउने सिंहको भनाइ थियो। उनले आफूलाई सभापतिमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए। त्याग नै त्याग भनेर मात्र हुन्छ ? १३ औं महाधिवेशनमा मैले रामचन्द्र पौडेललाई छाडेकै हो,’ उनले भने, ‘म पहिले महामन्त्री जितेको हुँ। बिपीको छोरा महामन्त्री उठ्ने भनेर म नै त्यसबेला शशांक कोइरालाको प्रस्तावक बसेँ।
आफूलाई नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अगाडि बढ्न भनेको पनि उनले बताए। ‘गणेशमानको छोरा भन्छौं पार्टीलाई राम्रो गर्नुपर्‍यो भनेर मलाई कार्यकर्ताहरूले भनेका छन्,’ उनले भने, प्रजातन्त्र जोगाउनुपर्‍यो। पार्टी संस्थागत गर्नुपर्‍यो। जनतालाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने हो।
मलाई पदमा पुगेर पैसा कमाउनु छैन। उनले पार्टीमा यतिका वर्ष काठमाडौं बाहिरका नेताहरू सभापति भनेको र यसपालि काठमाडौंलाई नेतृत्व गर्न दिइनुपर्ने बताए। ‘यतिका वर्ष काठमाडौं बाहिरले नेतृत्व गरेको अब पालो काठमाडौंको हो,’ उनले भने।